Henri Lecacheur (tohiny) | GAZETY_ADALADALA
Henri Lecacheur (tohiny)
Posted on 01/09/2008 by gazetyavylavitra
Voasambotra i Henri Lecacheur. Fa izao manaraka izao no mahalasa kely ny saina.
Iray volana tany aloha tany dia efa nidina teo tsy nahazo alàlana izy, ary nitondra megaphone sy nahavory vahoaka, nefa tsy nisy fisamborana. Tato aoriana kelin’izay indray dia mbola nisy ny famerenana ary dia nentina nalaina am-bavany tany izy ary avy eo dia navoaka, toy ny tsy nisy na inona na inona. Koa mitsàngana àry ny fanontaniana hoe: fa maninona no ankehitriny vao tsy navela hiteny ilay rangahy iny na dia roa minitra monja aza. Eto koa dia samy manana ny mari-pandrefesany ny rehetra satria misy ny nilaza fa dimy minitra latsaka izy no niteny, ao ny miteny fa latsaka izay (toa ahy indrindra koa). Tonga hifona, hono, ingahy Henri Lecacheur fa diso tamin’ny nametrahany izao fitondrana izao, ary dia haka ny hevitry ny vahoaka ny amin’izay tokony hatao, ka nihevitra ny hidina isan’andro teo amin’ny kianja 13 mai.
Mampanahy be ny olona nanatrika teo ny fitrangan-javatra satria toa hiverina indray ny fomba fanao tany aloha be tany, dia ny fisamborana sy fitsimponana ireo izay sahy maneho hevitra, milaza ny tsy fahafaham-pony sy ny tsy fahafaliany amin’ny antoko izay eo amin’ny fitondrana.
“Tampenana indray ve izany ny vavan’ny vahoaka sy ny maro an’isa manomboka izao”
hoy ny alahelo nipoitra tetsy sy teroa taorian’iny fisamborana teo amin’ny kianjan’ny 13 mai iny.
Ny mpitondra kosa milaza fa
“aleo aloha hiasa sy hanomboka zavatra vao mistikera sy manome tsiny”
. Mandra-pahoviana sy hatraiza anefa izay fetra hitsarana azy izay?
Eny fa hatramin’ireo haino aman-jery sy gazety maro tonga teny an-toerana aza dia hita ho nihafihafy ihany koa, no sady efa hatry ny ela no nidradradradra fa tsy afaka miteny an-kalalahana intsony, fa na tsy maintsy manaraka ny baikon’ny tompon’ny gazety na ny fampielezam-peo sy sary, na miala mitady asa hafa.
Ny antoko tsy eo amin’ny fitondrana moa dia efa imbetsaka no tsy tafiditra amin’izany atao hoe “haino aman-jerim-panjakana” izany.
“Matahotra ny amin’ny asany koa ireo mpiasa , ka tsy omenay tsiny”
, hoy ireo filohan’antoko rehefa anontaniana mikasika ny tsy ahafahan’izy ireny miteny sy maneho hevitra ao amin’ny RNM (Radio Nationale Malagasy) na ny TVM (Television Nationale Malagasy).
Ny mpiasa rehetra erak’ireo orinasa mamofompofona fanjakana koa dia tsy misy sahy mihetsika intsony noho ny tahotra ny ho voaroaka sy ho very fihinànana; toy izay mahazo ny mpiasa ao amin’ny JIRAMA, araka ny filàzan’ireo mpiasa ao. Momba io fahalalaham-pitenenana io dia nilaza ny filohan’ny solontenanan’ny mpiasa ao amin’ity orinasam-panjakana ity fa mba saika haneho hevitra tamin’ny fandaharana iray be mpanaraka amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray, mpandeha isa-maraina (KIDAONA MARAINA), saingy tsy nety nandray azy ny tao. Tsotra ny antony naroso, hoy ihany ity filohan’ny solontenan’ny mpiasan’ny JIRAMA ity,
“satria ny JIRAMA dia orinasam-panjakana, ka rehefa manohitohina sy miady amin’ny tompon’ny orinasa (fanjakana) ianareo mpiasa dia tsy afaka ny handray anareo izahay, sao hanan-draharaha amin-draFanja eo”
. Efa maro tokoa mantsy no niaina izay zava-mangidy izay, ka dia faifay sy matahotahotra ireo rehetra tompona haino aman-jery mbola te-hijanona amin’izay sehatra izay. Nandalo teo ny KARAJIA (Don Bosco FM93.4), ny “NY MARINA (Ny ANTSIVA FM97.6) sy ireo tany amin’ny faritany tany…
Fa raha iresaka kely ity fahalalahana miteny sy maneho hevitra ity isika, dia ireto misy tsetsatsetsa tsy aritro kely: mangataka hanao fanehoan-kevitra anaty Tranompokonolona (Analakely) ny mpanohitra, tsy mahazo, ary tsy vao indray mandeha no tsy nahazo alalana haneho hevitra toy izany ry zareo ireto, na izany teto an-drenivohitra, na tany amin’ny faritany. Ny zavatra misy anefa dia mahazo sy afaka manao izay tiany foana ny TIM (antoko eo amin’ny fitondrana, na iza io, na aiza. Vao tsy ela akory aza fa tamin’ny vaovao (Don Bosco) tamin’iny herinandro lasa iny no naharenesako fa any anaty biraom-panjakana, natao haiasana mihitsy ny TIM no manao fivoriana. Sao dia hivandravandra loatra ny mizana tsindrian’ila ry zalahy a! Raha misy singa iray mipitika anie ao anaty mizana, na amin’ny havia no miampy, na amin’ny havanana no miala, dia efa mitsimbadika ny tantana e! Toa an-drangahy ity izay tsy hafa fa mpanolo-tsain’ingahy RAVALOMANANA Marc ihany taorian’ny hetsika 2002 alohan’ny nidirany ho amin’ny laharan’ny mpanohitra. Mba saino ihany e!
Tsy aritro manaraka koa ilay hoe nidina teo amin’ny 13 mai ny mpanohitra fahiny ary dia nahazo felaka tehamaina, totohondry, daka tamin’ny vahoaka. Nisy mihitsy ny vaky rà sy nivonto tava tamin’izany. Tamin’ireny dia mbola nomba ilay tenin’ny mpitondra ny vahoaka, dia ilay hoe “avelao aloha hiasa….”. Fa tamin’iny andro nisamborana an’ingahy Henri Lecacheur iny kosa dia ny vahoaka mihitsy no nikiaka ny hamelana azy hiteny sy hilaza izay tsy zakany. Saingy nanaolona ireto GSIS nisaron-tava sy nitondra Kalachnikov, inona moa no azony natao? Tsy nisy fa dia ny nisento sy nitazana an’ilay rangahy nentina an-keriny natsofoka tao anatin’ilay 4×4 manga antitra laharana 0341 TA? sisa e!
Isika eto tsy hanome tsiny an-dranona sy ranona, fa mba mijery fotsiny ny fiainana andavanadnron’ny valala be mandry (ilay tsy hay hoe rahoviana vao hifoha, hoy i Sareraka izay)
Mino anefa aho fa na ho ela na ho haingana dia samy mbola ho tonga saina, na izahay tezaina, na ianareo mitaiza anay. Satria tokoa mantsy, NY ANIO NO MANDRAFITRA NY HO AMPITSO.
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: 13 mai, fahalalahana, Henri_Lecacheur, mpanohitra |
« Voasambotra i Henri Lecacheur (place 13 Mai 1972) Henri Lecacheur par L’Express de Madagascar »
saveoursmile, on 02/09/2008 at 3:00 said:
raha ny rakitra an-tsary nasehon’ny TV Plus tamin’ny vaovao an-tsary dia toa mampanontany tena ahy ihany ny fitrangan-javatra teny @ 13 mey tamin’io andro io. Ny tsapako rehefa nijery io oronan-tsary io mantsy dia toa miendrika sarimihetsika ilay zavatra teny… Toa efa niteny ampilaminana tamin’ny olona i Lecacheur, ary toa efa vita ny tiany holazaina izay vao naka azy ireto olona misaron-tava ka nampiditra azy tao anatin’ilay Mazda. (kanefa ilay nolazain’i Lecacheur teny tsy hitako hoe inona no nanafintohana) Marihina fa raha ny notaterin’ny TV Plus dia efa ela no niandry teo anefa ireo olona misaron-tava ireo (miaramila ofisialy tokoa ve ireo?), koa nahoana no navela hiteny/hiresaka tsotra amin’ny olona vao « nosamborina »?
Mampanon-tena hoy aho …Ny tantara no hitsara